ဝေဒနာရှင်။ ။ “ဆရာ..ကျနော့်စိတ်ထဲကစွဲလမ်းမှူတွေကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေတာ
အထူးကုဆရာဝန်။ ။ “အခုချိန်ထိမင်းကို နောက်ဆုံးဘယ်သူကုပေးလိုက်လဲ။”
ဝေဒနာရှင်။ ။ “အထူးကုဆရာဝန်ဦးဟိုဒင်း ပါဆရာ။”
အထူးကုဆရာဝန်။ ။ “ဆရာဝန်ဦးဟိုဒင်းလား ..ဟာသိတာပေါ့..
ဝေဒနာရှင်။ ။ ” သူက..ဆရာ့ဆီကိုသွားပြ ဖို့လမ်းညွှန်လိုက်ပါတယ်။”
“အလကားပါဗျာ၊သူ့ကိုယ်သူနပိုလီယံ နပိုလီယံ လို့ ပြောပြောနေတဲ့ ကောင်ပါ၊
တကယ်တော့ နပိုလီယံ က ကျုပ်ဗျ ကျုပ် ကျုပ်”
နံပါတ် တစ်ခုကိုအော်ဟစ်နေကြရာဆေးရုံတစ်ခုလုံး ဆူညံနေသည် ..
“ဘာလို့37 လို့အော်နေရတာလဲ”
“ဘာလိုအဲဒီလိုအော်နေကြတာလဲ” လူနာများက အပေါ်ကို
လက်ညိုးထိုးပြကြပြန်သည်။အဲဒါနဲ့ ဆရာဝန်လည်း အပေါ်ထပ်ကိုတက်သွားသည်။
“ငါကိုပြောကြစမ်းပါအုံး…ဘာလို့37 လို့ အော်နေတာလဲ..”
လူနာများကအောက်ကို လက်ညိုးထိုး ပြကြတယ်။ ဆရာဝန်လည်း
အောက်ထပ်ကိုငုံ ကြည့် လိုက်တယ်။ အဲဒီမှာ နောက်နားက လူနာက ဆရာဝန်ကို
လေးထပ်တိုက်ပေါ်ကနေ ကန်ချလိုက်တယ်။ ပြီးတော့လူနာတွေက ဆက်ရွတ်ကြတယ်။
စိတ္တဇ ဟာသများ (၄)
အခြားဆေးရုံတစ်ခုကို ပြောင်းပါတယ်။ ဆရာဝန်ကတော့ လေယာဉ်မှုးဘေးမှာထိုင်နေပါတယ်။အဲဒီမှာလေယာဉ်ထဲ ကနေအသံတွေကိုဆူညံနေအောင်ကြားရပါတယ်။ဆရာဝန်ကအရုးခေါင်းဆောင်ကိုဘဲလ်
ခဏနေ တော့ဘာသံမှမကြားရတော့။ ဆရာဝန်သည်သဘောကျသွားသည်။ ဘဲလ် နှိပ်ပြီး
“ဆရာဘဲ လေယာဉ်ပေါ်မှာဘောလုံးမကန်ရဘူးဆို…..အဲဒါနဲ့ ကျွှန်တော်လည်း
လေယာဉ် တခါးပေါက်ကိုဖွင့်ပေးလိုက်တာအခုသူတို့ အကုန်အောက်ဆင်းပြီးဘောလုံးကန်နေကြပြီ”
နင်.ကိုငါ အလုပ်ထုတ် တယ်
ကျွန်တော်ရဲ. အားထားရတဲ. အတွင်းရေးမှူး ၀န်ထမ်းမ လေး ကို ပြီးခဲ.တဲ.
အပတ်ကအလုပ်ထုတ် ပစ်ခဲ.ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းက ဒီလိုဗျ။ ပြီးခဲ.တဲ. အပတ်က
ကျွန်တော်.အသက် ၄၀ ပြည်. မွေးနေ.ပေါ.ဗျာ။ ဒီတော. ထိုနေ. မနက်စောစောထ
ပြီးအိမ်အောက်ဆင်း ရင် မိန်းမ က “Happy Birthday” လို.ပြောတာ ကြည်နူးမယ်
ပြီးတော.အနည်းဆုံးလက်ဆောင်တခုခု ကို လက်ခံမယ် ဆိုတဲ.
ခံစားချက်နဲ.ပေါ.ဗျာ။တကယ်တမ်းကျတော. သူမ က ကျွန်တော. ကို ဂရုတောင်
မစိုက်ပဲမီးဖိုချောင်ထဲမှာ အလုပ်ရူပ် နေပါတယ်။ အင်း ငါ.မှာ ကလေးတွေ
ရှိသေးတာပဲသူတို.ကို ဒီအသက်အရွယ် ရှိ ကျွေးမွေး လာမှ တော. ငါ.ကို
“ံHappyBirthday Daddy” တော. ပြောကောင်းပါတယ်။ ဟာ… ကလေးတွေလဲ ကျွန်တော.
ကိုဂရုမစိုက်ပဲ မနက်စာ ပဲ ငုံ.စား နေခဲ.တယ်လေ။
ဒီလိုနဲ.စိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ. ရုံးကိုသွားခဲ.ပါတယ်။ ရုံးတံခါးလဲ ဖွင်.ကော
အတွင်းရေးမှူးက “Good Morning ဆရာ၊ ဒါနဲ. ကနေ. က ဆရာ.မွေးနေ.နော်။” ဟာ
ဒီတော.ကျွန်တော် အလွန်အံ.အားသင်.သွားခဲ.ပြီး “ဟုတ်တယ် ကွယ်.”ဆိုပြောခဲ.တယ်။
ရုံးဆင်းချိန်လဲရောက်ရော အတွင်းရေးမှူး ကောင်မလေး က တံခါးခေါက်ကာ
အတွင်းရေးမှူး- ဆရာ ကနေ. ဟာ အရမ်းကို မင်္ဂလာရှိတဲ. နေ.ပဲ၊
နောက်ပြီးဆရာ.ရဲ.မွေးနေ.လဲ ဖြစ်နေတော. ညစာ ထွက်စားရအောင်လား။
ကျွန်တော်- ဟာ ကောင်းတာပေါ.ကွ။လာ သွားကျမယ်။
ဒီလိုနဲ.စားသောက်ဆိုင်ရဲ. သီးသန်. အခန်းထဲမှာ ၂ယောက်တည်း စကားတွေ
တ၀ပြီးပြောရင်းအရက်ကလေး သောက်ရင်း စားသောက်ခဲ.ကျပါတယ်။ အဲ.နောက်တော.
သူမကိုအိမ်ပြန်ပို.ပေးမယ် လို. ပြောလိုက်တော.သူမက “ဆ၇ာ သမီး အခန်းကို
လိုက်ခဲ.ပါလား။ဒီနားလေးမှာပဲ။” ဆိုတော. လိုက်သွားခဲ.တယ်။ သူမထပ်တောင်းဆိုပြန်ပါတယ်။
“ဆရာ အခန်းထဲထိ လိုက်ခဲ.ပါနော်.. နော်…သမီးတစ်ယောက်တည်း
နေတာပါ”။ ကဲ ဒီတော.လဲ အခန်းထဲသို. ထိရောက်သွားခဲ.တယ်။
ကျွန်တော်လည်းအခန်း ထဲ ရောက်ကော သူမ က “ဆရာ သမီး ရေ၀င်ချိုးလိုက်ဦးမယ်
ခဏလေးစောင်.နော်” ဆိုပြီး အခန်းလေး တခုထဲ ၀င်သွားတယ်။ တအောင်.နေတော. သူမ
ကမွေးနေ.ကိတ် အကြီးကြီး ကို ကိုင်လာပြီး ကျွန်တော. မိန်းမနဲ. ကလေး တွေ က
ဒါနဲ.ကျွန်တော်လဲ ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲ “ဟေ. ကောင်မ နင်မနက်ဖြန်
ရုံးတက်စရာမလိုတော. ဘူး နင်.ကို ငါချက်ချင်း အလုပ်ထုတ်တယ် ” ဆိုပြီး
ဘာလို.လဲဆိုတော. ကျွန်တော် က သူမ ခုတင်ပေါ်မှ ကိုယ်တုံးလုံး ကြီး နဲ. လှဲနေခဲ.လို.ပါပဲ။
Posted by shwewunyatana at 8:54 PM
jasmine(တောင်ကြီး) February 22, 2012 at 1:12 AM
နေကောင်းပါရဲ့နော် သတိတရရှိနေပေမယ့်အလုပ်များလို့ မလည်ဖြစ်ဘူးဘုန်းဘုန်းရှင်
8Yar February 28, 2012 at 6:54 PM
ဟား ဟား ဟား ဟား ရယ်ရတယ် ဘုရား။ ဟာသလေးတွေ ဖတ်ရလို ကျေးဇူးပါဘုရား။